Isitofu se-Pomace: izici, ukusebenza kanye nezinzuzo | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | | I-Biomass
Kunezinhlobo eziningi zezitofu emakethe ezisebenzisa zonke izinhlobo zikaphethiloli. Enye yazo yi- isitofu se-pomace. Iwuhlobo lwesitofu esisebenzisa uwoyela we-pomace owake wakhishwa njengophethiloli. Ayidingi ukufakwa okuningi futhi ukusebenza kwayo kulula.
Kulesi sihloko sizokutshela konke okudingeka ukwazi mayelana nesitofu se-pomace, izici zaso nokuthi sisebenza kanjani.
1 isitofu se-pomace
2 Izici okufanele zicatshangelwe lapho ukhetha isitofu se-pomace
3 Indlela ama-pomace pellets enziwa ngayo
Ubukhulu nobukhulu besitofu se-pomace kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu okufanele zicatshangelwe. Futhi kunezici nezici ezihlukene okufanele zicatshangelwe lapho kukhethwa phakathi kwamamodeli ahlukene akhona emakethe yamanje. Kunamamodeli anobukhulu obuhlukene, isisindo nosayizi. Izidingo zomuntu ngamunye kumele zicatshangelwe ukuze zikwazi ukujwayelana nezimo ngangokunokwenzeka. Akusizi ukuba nesitofu se-pomace esinosayizi omningi namandla uma indawo esizoyishisa incane. Ngakolunye uhlangothi, akusizi ukuba nesitofu esincane kakhulu ukuba ungasithola yonga amandla uma igumbi elizoshiswa likhulu.
Uma ungomunye wabantu abanekhaya elinendawo encane, kungcono kakhulu ukuthenga izitofu ezincanyana. Lezi zinhle ukuba nazo efulethini noma studio. Angaphezu kokwanele ukushisisa lawa magumbi amancane. Le mikhiqizo ingashintshwa ngokosayizi wayo, nakuba izitofu eziningi ezincane zivame ukukala phakathi kwamasentimitha amathathu kuya kwayi-50.
Kunconywa ukuhlola indawo esinayo endlini ukuze sikhethe kahle. Kufanele ukhethe phakathi kwezitofu ezinobukhulu namandla amakhulu noma ezincane. Konke lokhu kuzoncika futhi futhi kuthinte intengo yokugcina yomkhiqizo. Uma sikhetha imodeli yesitofu esikhudlwana, izindleko nazo zizoba phezulu. Nakuba zivame ukubiza kakhulu uma ziqhathaniswa namamodeli amancane, zivame ukumelana kakhulu futhi zisebenza kahle.
Izitofu ezinkulu zivame ukukala ngaphezu kwamasentimitha ayi-110. Iningi labo linama-burners asizayo ukuze ukusebenza kwawo kuqinisekiswe nakakhulu. Into evamile kakhulu ukuthi akufanele sikhathazeke ngentengo, ngoba ngokuvamile kukhona okunikezwayo emakethe yemali, akukwazi ukuba ukuphela kokuguquguquka okufanele kucatshangelwe. Kufanele ukhethe umkhiqizo ovumelana kangcono nezidingo zakho.
Izici okufanele zicatshangelwe lapho ukhetha isitofu se-pomace
Lezi zitofu zinezinzuzo ezihlukahlukene uma ukusetshenziswa kwazo kulungile. Ngokufika kobusika namazinga okushisa aphansi, kuvamile ukusebenzisa lolu hlobo lwesitofu kaningi. Ithuluzi okungafanele liphuthelwe kunoma yiliphi ikhaya. Izindaba ezinhle ukuthi kunamamodeli amaningi ongakhetha kuwo. Kodwa-ke, kungakuhle ukuthi wenze ukukhetha okufanele ukukhetha phakathi kwamamodeli ahlukene.
Kunezici ezihlukahlukene okufanele uzicabangele lapho ukhetha isitofu se-pomace esivumelana nezidingo zakho. Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuhlola kahle ikhwalithi yomkhiqizo esizowuthenga. Izinga eliphezulu enalo, ukuphila kwayo okusebenzisekayo kuyoba yinde, ngisho noma izindleko zithe ukuba phezulu. Izindleko ziyisici ongeke waziba. Njengoba sesishilo ngaphambili, kukhona okunikezwayo ezimakethe zezitofu ezingakusiza ukuthi uthole lo mkhiqizo ushibhe kancane.
Ngaso sonke isikhathi futhi ngaso sonke isikhathi zama ukukhetha isitofu sokunethezeka esilinganayo phakathi kokumelana nezindleko. Usayizi nawo uyisihluthulelo. Kunamamodeli amakhulu alungele izindawo ezinkulu. Lezi azibukeki kahle ezindaweni ezincane njengasemafulethini e-studio ngoba zithatha indawo enkulu. Into yokuqala okufanele uyikhumbule Linganisa isikhala lapho uhlele ukubeka umkhiqizo ngaphambi kokukhetha phakathi kwemodeli eyodwa noma enye.
Amandla omshini angenye yezinto ezibaluleke kakhulu lapho ukhetha isitofu esihle se-pomace. Kuye ngezinga lamandla isitofu esinalo, ukusebenza kwaso kungashintsha kakhulu. Into evamile kakhulu ukuthi ezimakethe kunezitofu ezingenakubalwa ezisebenzisa izindlela ezahlukene ukuze kuzuzwe umphumela oyifunayo. Nokho, futhi kukhona labo bantu abathanda kakhulu ukusebenzisa izitofu ezisebenzisa igesi nezinye ezisebenzisa ugesi.
Ukuziphatha kwamacala ahlukene kuyashintsha. Amagesi azuza ukukhohlisa okungcono kwezinga lokushisa. Izitofu eziningi zisebenza ngamazinga okushisa amisiwe phakathi kuka-150-190 degrees. Kubalulekile ukwenza ukukhetha okuhle njengoba ukuzuza isitofu se-pomace esinamandla amakhulu kunokudingekile kungaba nemiphumela ethile. lapho amandla ingaphansi kweminyaka engama-70 ithathwa njengesikhungo somndeni.
Indlela ama-pomace pellets enziwa ngayo
Njengoba igama layo liphakamisa, ama-pomace pellets atholakala ngokuqondile ngesikhathi senqubo yokukhipha amafutha omnqumo. Kulesi sigaba, ingxenye esele yokugaywa komnqumo iyaxutshwa ukuze kufike umkhiqizo wokugcina. Sithola izingxenye eziqinile zeminqumo (ithambo, isikhumba kanye nezinsalela ezinamafutha) kanye nezinsalela namanzi emifino.
Inqubo yokuthola i-pomace ayigcini lapha. Lokhu kulandelwa yisiteji sokugaya kanye ne-centrifugation. Umphumela walo mkhiqizo wumswakamo ophakeme kakhulu. Ukuze kukhishwe amafutha e-pomace, isiteji esisha sokukhipha senziwa esitshalweni se-pomace.
Amafutha e-pomace akhishiwe futhi i-pomace isetshenziselwa ukwenza uphethiloli we-biomass. Nakuba ifomu lokugcina lingama-pellets, anenani elibalulekile le-calorific nezindleko eziphansi, asetshenziswa kakhulu emandleni nasezitshalweni zamandla ezishisayo.
Nakuba i-oruo pellet isewuphethiloli we-biomass ngakho-ke umkhiqizo owenziwe ngezinto zokusetshenziswa zemvelo, ukusetshenziswa kwayo ezitofini ze-pellet zasekhaya noma ama-boilers akunconywa nhlobo njengoba kungamafutha aqinisekisiwe angenabuthi, ngakho-ke. Akumele ihlangabezane nezici zobuchwepheshe eziqinisekisa ukusebenza kahle kwedivayisi.
Ngokungafani namapellets e-bioforestry, i-orujillo biofuel inamazinga omswakama aphezulu kakhulu. Ngenxa yalokho, inani lokushisa nesikhathi sokufeza ukusebenza okufanayo landa kakhulu. Ububi kanye nezingozi zokusebenzisa lolu hlobo lwezinhlayiya akugcini lapho. I-Pomace pellets iqukethe umlotha ofika ku-8%. Akungabazeki ukuthi leli qiniso likwenza kucace ukuthi azifanele izitofu zasekhaya nama-boilers.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nesitofu se-pomace nezici zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » I-Biomass » isitofu se-pomace